Kuwana multitasking kubva ku 3D Kubata kunodzoka neIOS 11 | IPhone nhau
Tinoenderera mberi nekufungisisa pamusoro penyaya dzese muIOS 11. Imwe yacho ndeyekuti iyo 3D Kubata chiratidzo kunotitora isu kuenda kuchishanduri switch (ichinyanya kuwanda) yakanyangarika. Izvi ndizvo chaizvo zveanofarira mabasa evazhinji vashandisi, mukana wakatorwa kwavari pasina yambiro, uye zvakaipisisa, pasina kupembedzwa.
Zvisinei, Craig Federighi, Musoro weSoftware Injiniya kuApple, anovimbisa kuti multitasking basa kubva ku3D Kubata rinogona kudzoka kwatiri mune ramangwana kugadzirisa kweIOS 11… Chii chaizvo chawataura nezvazvo? Ngationei.
Ndiwo maitiro Craig Federighi apindura mupepeti we MacRumors, uyo akamubvunza mubvunzo unotevera:
Iwe unogona kumbogadzira iyo app switch switch ne 3D Kubata kumashure kuti ive sarudzo muIOS 11, isu tinofanirwa kuchengeta sarudzo yekuvhura switch switch kunze kwekudiwa kwekudzvanya bhatani reKumba kaviri - Shanduro yemahara.
Uye akanaka wekare Craig, uyo ari kushanda kupfuura nakare kose mushure mezvisina maturo zveFace ID kukanganisa, Akapindura mupepeti seizvi:
Mhoro Adam. Tiri kuzodzosera zvizere chinhu ichi chatakabvisa kubva kuIOS nezvikonzero zvehunyanzvi. Tichazopa mukana wekudzoka mune ramangwana iOS 11.x yekuvandudza.
Kutenda uye ndine urombo nekukanganisa.
Iye Craig ane munyu zvakadii, zvirinani kuti akwanisa kutiburitsa mukusavapo kwekusahadzika, nekuti kune vazhinji vanoda kuita uku kunotibvumidza kuwedzera hupenyu hwebhatani reKumba, kana nekuda kwekuti hatidi kuishandisa , sezvo isu tichitsikirira parutivi rwechiso zvinoonekwa nekukurumidza uye nekubudirira. Kuti Hatina chatichaita kunze kwekumirira Apple kuti itange iyo inotevera vhezheni yeIOS uye tidzorere zvazvakatora kubva kwatiri zvisina maturo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kuwana multitasking kubva ku 3D Kubata kunodzoka neIOS 11
Ini, semushandisi, ndinoshandisa basa iri zvakanyanya uye chokwadi ndechekuti ini handidi kuirasa.
kubvumirana zvachose. Ndinovimba vanomutsiridza iyo sarudzo. Zvakadaro, ndinofunga zvaizonyanya kubatsira kana vakachinja maitiro. kune avo vedu vane ruoko rwerudyi, hatigone kusvika kune rimwe divi nenzira kwayo uye tinyore zvakanyanya kuti ubate 3d (zvirinani mune yekuwedzera mamodheru)
Kana izvi zviri izvo zvauri kutsvaga ...